Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwe-AliExpress - izici eziyinhloko zesikhulumi sezitolo esisezingeni eliphezulu online
Ukuthenga kwe-AliExpress - ama-PROS nama-ConS okufanele wazi
Ikhompyutha & Ihhovisi
Amathoyizi, Izingane & Nezingane
Ikhaya Nengadi, Ifenisha
Ezempilo Nobuhle, Izinwele
Kulezi zinsuku abathengi banethuba lokukhetha ipulatifomu efanelekayo yokuthenga kusuka ezinhlobeni ezinkulu zezitolo ezikhona eziku-inthanethi. Iwebhusayithi ye-AliExpress ihlala iphakathi kwe-e-commerce ehamba phambili ethandwa ngabathengi be-netizens. Isici esiphawuleka kunazo zonke esitolo esiphakeme samaShayina esikhulukazi uhla lwezimpahla ezithengiswa ngentengo efanele.
Ngokusho kokubuyekezwa kwe-AliExpress, amakhasimende emhlabeni wonke akhetha ukuthenga lapha kakhulu ngenxa yokuthenga izinto zomkhiqizo azithandayo ngenani elingabizi kakhulu kunamanye amapulatifomu aziwa kahle anikezayo. Ngaphezu kwalokho, indawo ethengisa izinto zaseChina inezilimi eziningi. I-AliExpress ngesiNgisi ihlinzeka ngokuhumusha okuguqukayo kwiyunithi ngayinye etholakalayo.
Izici ze-AliExpress zokuthenga okusheshayo nokunenzuzo
Le projekthi yasungulwa iminyaka engaphezu kwengu-19 eyedlule yibhizinisi lakwa-Alibaba futhi isinezikhundla eziphezulu phakathi kwamapulatifomu e-commerce aphesheya. Kufanele kuqashelwe ukuthi iwebhusayithi inenqubo elula futhi esheshayo yokubhalisa futhi isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula sokuzula ntofontofo. Abasebenzisi bayakwazi ukudala i-akhawunti ngezindlela ezimbili:
ukufaka imininingwane yomuntu siqu ngefomu lokubhalisa;
ukungena ngemvume ngosizo lwa iyiphi i-akhawunti yezokuxhumana (njenge-Facebook, Google noma i-VK).
Iya ku-Ali Express
Inqubo yokudalwa kwama-akhawunti ihlinzekelwa mahhala futhi ifaka imininingwane eyengeziwe yokugcwalisa ifomu elikhethekile le-inthanethi. Kuyadingeka ukudalula:
Abaqalayo bangempela (igama lokuqala nelokugcina);
Njengoba esekhethe izigaba ezimbalwa zentshisekelo, umsebenzisi angaqala ukufuna izimpahla azokuthenga. Isitolo se-inthanethi sizohlunga izinto zomkhiqizo ezihehayo uma uthenga okuthe xaxa online. Izaphulelo ezingapheli nokunikezwa okukhethekile kuzoba ibhonasi eyengeziwe yamakhasimende angahle abe khona. Abanye abantu bayazibuza: “Ungayithenga kanjani eChina? Ngabe kuphephile? ” Uku-oda into yomkhiqizo ontengo yamanani entengo kungenzeka kungenzeka ngezindlela ezimbili futhi:
Ukuze unike inkinobho "Thenga Manje" bese uye kumenyu yezinkokhelo.
Faka izimpahla enqoleni yokuthenga ukuze ungalandeleli indawo yokuthengisa.
Yini ongayithenga ku-AliExpress?
Zonke izimpahla zivezwa ngokuya ngezigaba. Kulula ukucinga okudingakalayo. Ngokwezibalo, iningi lamakhasimende likhetha ukuthenga izinto zobuchwepheshe, izingubo kanye nezikhumbuzo ezihlekisayo ku-AliExpress. Imikhiqizo ephawuleka e-USA nayo iyenziwa ezinhlu. Kepha unake ukuthi i-trendy dress noma i-mtindo yemfashini ngentengo ephansi ingatholakala isithombe esihle futhi esilula sokuziphatha.
Kuyaqapheleka ukuthi abathengisi abahamba phambili be-AliExpress bashintsha unomphela. Zonke izihloko ezishisayo nezaphulelo zethulwe ngenhla kwekhasi. Isitolo se-inthanethi esiphakeme samaShayina kufanelekile ukuthenga okunenzuzo ku-inthanethi. Ngokucatshangelwa kwezinhlobonhlobo ezinkulu zezimpahla, inqubomgomo yamanani akhangayo nohlelo lokukhokha olunethezekile, okuthengiswayo kwe-AliExpress kuyaqhubeka nokwengeza ukusekelwa okuthandwayo.